Accueil > Gazetin'ny nosy > Vovonana FANORO: Mitaky ny hananganana governemanta teknisianina
Vovonana FANORO: Mitaky ny hananganana governemanta teknisianina
Manao sesilany ny fanehoan-kevitra pôlitika, tao aorian’ny fanapahana navoakan’ny Fitsarana avo momba ny Lalàmpanorenana. Ireo olom-pirenena mivondrona ao anatin’ilay vovonana antsoina hoe FANORO “Tambazotran’ny tsara” no naneho ny heviny, omaly, ary nanolotra soson-kevitra ahafahana mivoaka ao anatin’izao krizy pôlitika lalovan’ny firenena izao. Vovonona iray vao nitsangana tamin’ny herinandro lasa teo ny FANORO, ivondronan’ireo olom-pirenena mandray andraikitra ho an’ny firenena. Anisan’ireo lohandohany mpitarika izany ny filohan’ny sendikan’ny mpitsara eto Madagasikara Fanirisoa Erinaivo, ny mpanakanto Françis Turbo, ary ny mpanamory fiaramanidina Rado Rabarilala. Vahaolana naroson’ity fikambanana vaovao ity ny tokony hananganana ny governemanta ho fanavotam-pirenena (gouvernement de salut public) fa tsy governemantan’ny marimaritra iraisana, izay ambaran’izy ireo fa fizaran-tseza fotsiny. Teknisianina zato isan-jato no tokony handrafitra izany governemanta izany fa tsy mpanao pôlitika mpitady toerana. Olona tsy afaka milatsaka ho fidiana na tendrena mandritra ny 5 taona manaraka, tsy mbola nandray anjara tamin’ny governemanta nifandimby ary tsy mbola voaheloka na manana raharaham-pitsarana. Raha ny hevitry ny FANORO ihany dia tsy tokony hihaotra ny 12 volana ny fotoam-piasàn’io governemanta io, ary mpikambana 15 farafahabetsany no mandrafitra azy. Mba ahatongavana amin’izany anefa dia fepetra ilaina ny fanelanelanana sy famondronana avy amin’ny FFKM sy ny CFM, ary ny fametrahana tondrozotra hiarahana mikaon-doha amin’ny firaisamonim-pirenena sy firaisan-kina sendikaly rehetra eto amin’ny firenena. Iray amin’ireo laharam-pamehan’io governemanta io ny fandrafetana sy ny fanombohana ny fampiharana ny tondrozotra ho an’ny fanarenam-pirenena.
Fanapahan-kevitry ny HCC: Nangata-panazavana ny mpisolovavan-dRajaonarimampianina
Mbola voaporofo tamin’iny andron’ny omaly iny fa misy teboka tsy mazava ny fanapahana navoakan’ny Fitsarana avo momba ny Lalàmpanorenana, ny zoma 25 mey lasa teo, mikasika ny fitoriana napetrak’ireo solombavam-bahoaka 73. Tsy mazava satria na ny filoham-pirenena aza tsy mahazo tsara izany fanapahan-kevitra izany ka naniraka mpisolovava teny Ambohidahy, nangataka fanazavana bebe kokoa amin’ny tena tian’ireo andininy sasantsasany ambara. Omaly tolakandro no tonga teny amin’ny foiben’ny HCC eny Ambohidahy ireo mpisolovavan’i Hery Rajaonarimampianina roa, nametraka izay taratasy fangataham-panazavana izay. Nisy ny tafatafa fohy nataon’ireto mpisolovavan’ny filoha ireto tamin’ny mpanao gazety, ary tamin’izany no nanambaran’izy ireo fa misy ny andininy sasantsasany ao anatin’ilay fanapahana laharana 18-HCC/D3 natao tamin’ny 25 mey 2018 no tsy mazava amin’ny filoham-pirenena ka izay no antony nametrahana ny fangatahana eo anivon’ny Fitsarana avo momba ny Lalàmpanorenana. Anisan’ny tsy mazava amin’io fanapahan-kevitry ny HCC io ny momba ny fahefan’ny filohan’ny repoblika, ao anatin’ilay governemantan’ny marimaritra iraisana, na koa ny fahefana amin’ny fanendrena ireo mpikambana handrafitra izany governemanta izany. Ankoatra izay, tsy mazava amin’i Hery Rajaonarimampianina ihany koa ny momba ny fe-potoana nomen’ny HCC azy, amin’ny fanatanterahana ireo andininy rehetra voalaza ao anatin’io fanapahan-kevitra io. Mazava izany fa tian-dRajaonarimampianina fantarina tsara ny sazy mety hahazo azy raha toa ka tsy tanteraka ao anatin’ny fe-potoana voafaritra ity didin’ny Fitsarana avo momba ny Lalàmpanorenana ity. Tsy fantatra moa hoe rahoviana na afaka firy andro vao hamaly ny fangatahana napetrak’ireto mpisolovavan’ny filoham-pirenena ireto ny HCC, ny azo antoka aloha hatreto dia rahampitso zoma no fe-potoana farany ahafahan’i Hery Rajaonarimampianina manendry ny praiminisitry ny marimaritra iraisana. Miandry ny mety ho tohin’ny raharaha ny mpanara-baovao rehetra ankehitriny satria na ilay maro an’isa eo anivon’ny Antenimierampirenena aza mbola ifandroritan’ireo depiote mpanohitra sy ireo mpomba ny fitondrana. Ny andaniny sy ny ankilany izay samy nanolotra anarana praiminisitra ka tsy fantatra ny fanapahan-kevitra ho raisin’ny Filohan’ny Repoblika.